China mgbapụta Rubber Front liner eyi Parts factory na suppliers | YAAO
Mgbe pumping abrasive slurries ọ bụghị a ajụjụ nke ma ọ bụrụ na ị ga-mkpa slurry mgbapụta ọnwụ sọ na-eyi akụkụ - ọ bụ ajụjụ nke mgbe. Na sistemụ jikọtara ọnụ na otu ụzọ esi eweta usoro anyị na-eme ka ngwa ahịa, nkesa na ntinye nke slurry pump akụkụ na ọnwụ sọ na-eme ka usoro ndị ahịa anyị na-agbatị ogologo oge, nchekwa ma na-arụ ọrụ nke ọma.
YAAO na-emepụta akụkụ mgbapụta slurry niile na-agbanwe nke ọma maka Warman na akụkụ ndị ọzọ OEM slurry pump.
Enwere ike ịkọwa akụkụ nke nfuli slurry n'ime ụzọ atọ dị mkpa: slurry pump pump, akụkụ ndozi akara, akụkụ ndokwa ụgbọala, yabụ a na-ahazi akụkụ mgbapụta anyị dịka echiche a.
Beelọ ọrụ Tobee bụ ebe agwakọtara ọnụ, yana imepụta, ịkwalite ụkpụrụ, ịkpụzi, nkedo, ọgwụgwọ ọkụ, ịkpụzi yana nzukọ. Anyị nwere ike ịkwado onye ahịa ahụ dabara adaba mgbe etinyere akụkụ ahụ na okpokoro OEM ndị dị ugbu a ma ọ ga-arụkwa ọrụ na hydraulically dị ka OEM mebere.
YAAO na-enye ọtụtụ ụdị slurry mgbapụta gụnyere impellers, olu dị elu, akpịrị akpịrị, tinye efere liner etiti, ndị na-ere ahịa, okwu mgbapụta, na-ebu nzukọ wdg.
The roba mmiri akụkụ bụ oké na-eyi ndị na-eguzogide na corrosion-eguzogide, na-eji maka acid-arụ ọrụ ọnọdụ. Dị ka tailing na Ngwuputa ụlọ ọrụ, slurry na obere ahụ na-enweghị ike ike n'ọnụ. Akụkụ a na-ewepụsị ebe niile na-agụnye mkpuchi mkpuchi mkpuchi, akpịrị akpịrị, eriri efere akara, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. The roba akụkụ ahụ mapụtara bụ nke Natrual Rubber, koodu bụ R55 na R38, nke gurantees magburu onwe arụmọrụ gụnyere eyi eguzogide, chemical-eguzogide, waterproof na elu ọrụ okpomọkụ nso si -40-75.
Rubber impeller akụkụ bụ High Chrome Alloy Impeller. Anyị nwere ike na-enye Rubber slurry mgbapụta na Metal Impeller. Impeller bụ akụkụ kachasị mkpa nke mgbapụta mgbapụta Centrifugal. Nfuli Centrifugal chọrọ impeller iji mepụta ike centrifugal nke na-edozi slurries. A na-eme ike ikuku nke ikuku nke ikuku site na nkedo mgbe ọ na-agba ọsọ ọsọ.
Mgbapu Rubber - A na-agbanye ndị na-anọchi anya ngwa ngwa, ọ bụghị glued, na casing maka mgbakwunye dị mma na ịdị mfe nke mmezi. Ndị na-arụ ọrụ siri ike na-agbanwe agbanwe kpamkpam na elastomers a kpụrụ akpụ. Elastomer akara yiri mgbaji njikọ niile.